FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA DACHSHUND - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Dachshund
Sary natolotry ny R sy R Kennels
Alika Mafana kely
Alika kely misavoana
Alika eto an-tany
Misy karazany telo ny Dachshund: ny fohy volo, ny manana volo ary ny lava volo. Amin'ny tsirairay amin'ireo karazany ireo dia misy habe telo. (Jereo Haavo sy lanjany.) Ny vatan'i Dachshund dia lava kokoa noho izy lava, hozatra manana tongotra fohy. Manana lohany lava sy somary misy karandohany convex izay atohoka amin'ny volomaso mipoitra. Ny vavony dia lava. Ny valanorano dia matanjaka amin'ny molotra tsy misy pendent. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso miendrika amandy dia mena mainty na mainty volontany. Ny sofina finday dia mihantona lava eo amin'ny takolany. Ny vatan dia manana sternum mahery mipoitra ary kibo somary hahemotra kely. Ny rambony dia entina mifanaraka amin'ny lamosiny. Ny palitaon'i Dachshund lava volo dia tokony ho mamirapiratra, marevaka ary mitovy fanamiana.
Dachshunds dia manana loko isan-karazany. Ireto manaraka ireto.
Ny loko matevina dia: mainty, mena (manomboka amin'ny frezy blond ka hatramin'ny auburn lalina), sôkôla (volontany), isabella (tan na fawn), crème (blond tsy misy soritra mena, manomboka amin'ny blonda volamena ka hatramin'ny platinum (ilay maivana kokoa no tsara kokoa) ary manga (volondavenona). Amin'ny karazana wirehaired, krim dia antsoina hoe wheaten.
Zavatra mastiff irlandey wolfhound Mix
Bicolor Dachshunds dia mety mainty sy mainty, mainty sy creme, sôkôla sy volomboasary, sôkôla sy creme, manga sy mena, na manga sy creme. Amin'ireo tsikombakomba ireo, ny loko teo aloha dia ny loko ifotony, ary ny tan na creme dia miseho amin'ny tarehy sy ny teboka. Sable dia palitao mena miaraka amin'ny lamba ambonin'akanjo. Ao amin'ny karazana wirehaired, misy koa boar dia, tsy manam-paharoa satria ny volon'ny volo dia mena sy mainty.
Lamina sy tricolor:
Brindle: ny brindles dia tokony esorina amin'ny vatana iray manontolo ary mety ho hita amin'ireo loko etsy ambony ireo.
Dapple: ny dappling dia aseho amin'ny fipetraky ny loko maivana kokoa amin'ny loko maizina kokoa. Izy io dia mety hiteraka Dachshund misy loko telo. Ohatra: mainty misy teboka tan ary volavola volafotsy. Raha misy eo amin'ny maso ny fisotofana dia mety manga ny maso iray na roa. Ny sisiny roa sosona dia miseho ihany rehefa miforitra ny sire sy ny tohodrano, ary vokatr'izany dia manampy faritra fotsy be amin'ny lamina dapple. Nisy lesoka ara-pananahana nateraky ny fiompiana dapple roa.
Piebald: ny piebalds dia azo asiana bicolored na tricolored. Izy ireo dia manana vatana fotsy misy fofona miloko iray na roa loko matevina, toy ny mena amin'ny fotsy, na mainty sy mainty amin'ny fotsy. Ireo patch dia mety miainga amin'ny teboka vitsivitsy ka mandrakotra ny 50 isan-jaton'ny vatana. Mety misy fikitihana manerana ny faritra fotsy, na mety fotsy fotsy.
Raha misy lamina fiompiana hazo fijaliana, toy ny dapple to piebald na brindle to piebald, ny patch dia mampiseho ny modely dapple na brindle. Miankina amin'ny klioban'ny zaridaina no nanoratana ny alika ny fisoratana anarana, fa raha ny lamina iray ihany no voasoratra dia tokony hosoratana ho alika piebald ilay alika.
Ny Dachshund dia liana, hendry, velona, ​​be fitiavana, be hambo, be herim-po ary mahatsikaiky. Natokana ho an'ny fianakaviany izy io, mety ho kely sarotra ampiofanina SY tranom-bahiny , fa tsy azo atao. Mandeha tsara ny dachshunds. Mila manana tompony io alika kely io izay mahatakatra ny fomba hahatongavany mpitarika fonosana na izy no handray ny trano, ary manomboka manandrana milaza amin'ny tompony izay tokony hatao. Raha avela handray an-tanana ny alika dia hipoitra ny olana maro amin'ny fitondran-tena, toy ny, saingy tsy voafetra ho, fanaka miambina , fanahiana fisarahana , miambina sakafo, kilalao na zavatra hafa, mipoaka, manaikitra ary mitebiteby lava. Ho lasa tsy ampoizina miaraka amin'ny ankizy sy olon-dehibe tsy fantany. Raha miharatsy tokoa izy io dia mety hanjary tsy ampoizina amin'ny tompony. Matetika izy ireo dia atolotra ho an'ny ankizy be taona sy be fiheverana, satria ny ankamaroan'ny tompona dia tsy mampiseho fahaiza-mitarika amin'ny alika kely ho an'ny alika kely, ka mahatonga azy ireo hiaro tena antonony na mahery vaika, fihetsika iray izay afaka miova raha toa ka manomboka mpitarika azy ireo ny olombelona. Raha mahazo ny fitarihana mety izy ireo dia afaka mihavana amin'ny ankizy. Ity karazan-kazo ity dia manana toe-tsaina tokony hohadina. Tsy maninona izy ireo amin'ny biby hafa, na izany aza, indray mandeha indray, tsy misy fitarihana mety avy amin'izy ireo olona , izy ireo dia mety saro-piaro, mahasosotra, mafy loha ary manaikitra haingana, indraindray mandà ny hitantana azy. Raha avelanao haka ny tranonao ny alikanao kely dia hiezaka mafy indrindra ny alika hitazona ny olony rehetra - lanja izay tsy tokony apetraka eo an-tsorok'alika, indrindra fa ny iray mamy toy ny alika kely toa ny Dachshund . Ireo toetra ratsy ireo dia tsy toetra Dachshund, izy ireo aretin'alika kely toetra. Midika izany, ny ankamaroan'ny tompony dia mandray ny alikany kely toy ny zazakely, fa tsy manome azy ireo fitarihana, ary koa ny fitsipika tokony harahin'izy ireo miaraka amin'ny fetrany, ary tsy avela hanao, izay irin'ny rehetra ny alika. Dachshunds izay mitarika ny olombelona miaraka a fitsangatsanganana entana isan'andro dia mpianakavy mahafinaritra miaraka amin'ny toetra tsara.
Misy karazany telo ny Dachshund, ny fohy volo, ny manana volo ary ny lava volo. Raha ny fenitra AKC dia misy habe roa, ny Standard sy ny Miniature. Tsy toy ny AKC, i Eoropa koa dia manaiky ny karazana Toy antsoina hoe kaninchen, izay teny alemà ho an'ny bitro.
Standard: Haavo 8 - 11 santimetatra (20 - 27cm) lanja - mihoatra ny 4,9 kilao (4.9 kg) amin'ny faha-12 volana.
Miniature: hahavony hatramin'ny 5 - 7 santimetatra (13 - 18 cm) lanja 11 pounds (4,9 kg) na latsaky ny 12 volana.
Kilalao: haavo hatramin'ny 30 santimetatra (lanjany) 3,5 kilao (3,5 kg) amin'ny faha-12 volana.
Fanamarihana: Ny teny tsy ofisialy toy ny tweenie, dwarf, kilalao, teacup na micro-mini Dachshund dia tsy fiovan'ny haben'ny AKC, na izany aza misy mpiompy mampiasa ireo teny ireo ary miteraka alika kely kokoa. Anaram-bosotra hafa tsy ofisialy nomen'ny olona anarana hoe Wiener Dog, Little Hot Dog, Hotdog Dog ary Sausage Dog.
Ny anaram-bosotra 'tweenie' dia matetika ampiasaina tsy ofisialy rehefa latsaka eo anelanelan'ny kely sy ny fenitra ny habeny.
Mora tratry ny olan'ny kapila (hazondamosin'i Dachshund), olan'ny lalan-dra, aretim-po ary diabeta. Mora amin'ny fivontosan'ny sela . Dachshunds dia manana fironana ho tonga matavy loatra sy kamo. Loza ara-pahasalamana lehibe io, mametraka soritr'aretina ao an-damosina.
Tsara ho an'ny trano fonenana. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany.
Alika mavitrika ireo ary manana tanjaka mahagaga tokony hahatongavan'izy ireo nandeha isan'andro . Hahafinaritra azy ireo koa ny fotoana filalaovana ao amin'ny valan-javaboary na faritra malalaka sy azo antoka hafa. Mitandrema ihany anefa, rehefa akaiky ny mpandeha an-tongotra satria ny Dachshunds dia mety voahitsaka kokoa noho ny alika hita maso kokoa. Tokony ho kivy amin'ny fitsambikinana izy ireo, satria mora tohina amin'ny hazondamosina.
Ny lava-bolo dia mitaky fikolokoloana isan'andro sy fikosehana ary mila fikotranana indroa isan-taona ny fikolokoloana volo, ary ny volo fohy kosa dia mila fikosehana matetika amin'ny lamba mando. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Dachshund dia niainga tany Alemana tamin'ny voalohan'ny taona 1600. Nihalehibe hihaza lalao kely toy ny badger sy bitro , ny Dachshund dia nanafoana ny tongony hihaza sy hanaraka ireto biby ireto amin'ny tany ao anaty lavaka izay ahafahan'izy ireo miady amin'ny remby mandra-pahafatiny. 'Dachs' no teny hoe badger. Dachshund kely kokoa izay niterahana fihazana ny bitro sy ny stoat. Dachshunds dia manana toetra 'terrier' maro. Alika marobe sy be herim-po izy ireo ary fantatra fa mandray amboahaolo sy otter koa. Nihena ny isan'ny karazany nandritra ny Ady Lehibe l, saingy ny alika dia nafarana avy any Alemana nankany Etazonia ary nitombo indray ny gen gen. Ny Dachshund dia neken'ny AKC tamin'ny 1885.
Ho an'ny karazana mahazatra ihany koa ny ANKC, CKC, APRI, ACR
Dexter ny malama Dachshund
Turbo the dapple Dachshund amin'ny 2 taona— 'Mety aminy ny anarany. Izy hyper nefa miaraka amin'izay dia tena mahafinaritra izy. '
Bentley the Mini Dachshund amin'ny faha-9 volana— 'I Bentley dia nomen'ny namako iray ahy, tompon'ny reniny sy ny dadany ary nahafinaritra azy izany! Izy marenina , fa raha tsy tenenina ianao dia tsy ho fantatrao izany! Fantany ny famantarana / famantarana famantarana ny tanana, ka fantany avokoa ny zavatra fantatry ny alika mandre. Tena marani-tsaina izy ary manana maso manga , fa ny iray kosa dia manga ary ny iray kosa dia 1/2 lanitra manga ary 1/2 manga dia TENA. Na aiza na aiza misy ahy dia hahita an'i Bentley eo ivohoko ianao, eny fa na dia ao amin'ny trano fidiovana aza. izy mitomany amin'ny fotoana rehetra handroako , aza manontany ahy ny antony! lol Bentley no zanako malalako. '
'Scrappy (ao aoriany) dia lehilahy fito taona sy fenitra Dachshund ary Moxie (eo aloha) dia vehivavy dapple volafotsy kely 9 volana Dachshund.'
'Russell dia Dachshund mena mena iray taona. Izy dia tovolahy sambatra be vintana izay tia ny olona rehetra, mahita lalana hatrany amin'ny feny ianao mba hahafahany milelaka ny tavanao sy mifampikasoka aminao mandritra ny ora maro. Fanomezana tsingerintaona ho an'ny reniko izy, satria alika nofinofisiny foana io. Izy irery no zazalahy kely mamy indrindra! '
Alika kely Dachshund kely kely malefaka afaka 10 herinandro
Oreo dia Dachshund mini tsara tarehy, mavitrika, adala, lava volo.
'Ity i Avery, ilay Dachshund kely efa lava volo, tokony ho 5 volana teo ho eo. Izy dia crème anglisy piebald dapple Dachshund ary tandindon'ny karazany. Tiany ny mihaza, mihady ary mivovo ary ny fialam-boly tiany indrindra dia vorona manenjika SY biby mpikiky an-tokotany. Na dia mety ho toy ny 'alika prissy' aza izy dia tena hainy ny mandoto! Izy dia tovovavy maditra , saingy tena tia misitrika ambony fandriana ao ambanin'ny lamba firakotra miaraka amiko. '
'Oscar dia mpamonjy Dachshund dimy taona avy amin'ny Hearts United for Animals, fialofana tsy misy mpamono olona any atsimo atsinanan'i Nebraska. Efa ho herintaona izao no niarahany taminay. Zaza iray potika izy! Izy dia mainty sy mainty 'Tweenie' (eo anelanelan'ny fenitra sy mini). Izy dia natsangana niaraka tamin'i Dollie 'rahavaviny'. Avy tany an-trano iray ihany izy ireo ary navoakan'ny tompony teo aloha tao amin'ny fivarotana garazy iray nisy soratra hoe 'Malalaka Amina Trano Tsara.' Mamporisika anay izahay hanohana ireo toeram-pialofana tsy hamono olona ary hanohana ny fanafoanana ny fikosoham-borona! '
'Ny alikako dia mini Dachshund dapple, aseho eto amin'ny 5 volana. Buddy dia karazana bandy milamina tokoa satria Entiko mandeha an-tongotra izy isan'andro, izay tena tiany. Hendry be i Buddy ka nampianariko hipetraka, handry, hihorona, hihozongozona, hiteny, hilalao maty ary hanao boribory (eo no hihazakazahany boribory iray). Afaka mipetraka sy mandry lavidavitra eny koa izy. Te hanana azy ny CGC (Citizen Good Canine) aho. Mampihomehy tokoa ny mijery azy milalao sôkôla Lab izay andehanako. Mila mitandrina isika rehefa milalao izy ireo noho ny haben'ny habeny. Buddy dia manaiky fatratra manodidina ny alika hafa ka handeha amin'ny alika hafa ary hianjera amin'ny lamosiny. Natsangako ho azy ny lalan'i Cesar hatramin'ny andro voalohany ary te ho mpitsikilo alika aho. Buddy dia canine mahay mandanjalanja. Manana ny vanim-potoana Dog Whisperer rehetra amin'ny DVD aho ary mamaky ny bokiny rehetra. Mpankafy be aho ary ny alikako dia voalanjalanja hatramin'ny andro voalohany. Izaho dia mpandehandeha alika izao ary mandeha ny alika Cesar's Way rehetra ary tafiditra ao anaty fonosana alika i Buddy. '
Gretta the Dachshund amin'ny 20 volana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Dachshund
Sary Dachshund 1
Sary Dachshund 2
Sary Dachshund 3
Sary Dachshund 4
Sary Dachshund 5
Alika Dachshund: sary an-tsokosoko voaangona
sy fotsy volo bulldog frantsay
min pin terrier afangaro alika kely
fitoviana alika amin'ny karazany hafa
labrador sy st bernard mifangaro